Waa kuma C/raxmaan C/shakuur Warsame
Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Ku dhashay degmeda B/burte ee Gobolka Hiiraan
Ø Mudane C/shakuur wuxuu tacliintiisa Hoose/ Dhexe iyo Sare intaba ku qaatay Degmada Buuloburte ee Gobolka Hiiraan. Wuxuu kaloo labo sano oo waajibka shaqada Qaranka ah ku gutay Degmooyinka Jalalaqsi iyo Buulaburte.
Ø Wuxuu shahaadada koowaad ee Jaamacadda ka qaadatay Jaamacadda Caalamiga ah ee Afrika ee wadanka Suudaan oo uu kabartay sharciga.
ØWuxuu Shahaadadii labaad ee Masters Degree ku sameeyey isla sharciga wuxuuna ku takhasusay(COMPARATIVE FEDERALISM) Jaamacada Qaranka Malaysia (National University Of Malaysia UKM). .
ØWuxuu koorsooyin la xiriira Hogaanka iyo maamulka, Xallinta Khilaafaadka, Dhismaha Nabadda, Xariirka istaraatiijiyaadka ku sameeyey Machadka Hogaanka iyo Maamulka ee London.
ØMudane C/shakuur kahor intii uusan ku biirin siyaasada wuxuu kashaqeeyey arrimaha Samafalka wuxuuna sarkaal sare iyo madaxba kasoo noqday Hay'atul Culyaa, Wakaalada Muslimiinta Afrika, iyo Mu’asasada Sheekh Zaaid Foundation.
ØWuxuu ka mid ahaa dadka udhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Ingiriiska, wuxuuna ka mid ahaa aasaasayaashii Somali Concern Group iyo Somalia Diaspora Conference..
ØWuxuu kaloo madax kanoqday Xarunta Islaamiga ah ee Waqooyiga London oo ah xarunta sedexaad ee Dalka Ingiriiska uguwayn, isagoo kaalin la aqoonsaday kasoo qaatay la dagalaanka Xagjirka, wadanoolaashaha iyo isdhexgalk abulshada.
ØMudane C /shakuur wuxuu kasoo shaqeeyey saxaafadda, isagoo tafatire ka ahaa website goobjoog iyo majaladda Hiiraal.
Ø Wuxuu xubin joogta ah mudo 10 sano ka badan ka ahaa Xarunta Daraasaadka Xiriirka dawliga ah ee ChathamHouse
ØWuxuu ku biiray ururkii Dib u Xoraynta Soomaaliyeed ee (ARS) wuxuuna qabtay xilka guddoomiye ku xigeenka Golaha Dhexe.
Ø Wuxuu garwadeen(Chief Negotiator) ka ahaa shirkii dib u heshiisiinta ee Jabuuti 2008 dii ku dhexmaray dawladii ku meelgaarka ahayd ee uu hogaaminayey Mudane C/laahi Yuusuf Axmad(AUN) iyo Isbahaysigii Dib u xoraynta Soomaaliya, halkaasoo lagu soo dhisay dawlad midnimo qaran.
ØWuxuu kamid noqday Baarlamaankii kmg ahaa, waxaana loo magacaabay Wasiirkii Qorshaynta Qaranka iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee DKMG.
Ø Wuxuu Soomaaliya u metalay shirarka heergobol iyo caalami ah,wuxuuna markii ugu horaysay shir gudoomiyey mudo 20 sano ah Golaha wasiirada Arrimaha debeda ee Jaamacadda Carabta ee kadhacay dalka Masar, halkaasoo wasiiradii iyo safiiradii shirka kaqeyb galay ay Somaliya ugu hambalyeeyeen ammaana ugu soojeediyeen hogaamintii shirka, gaar ahaan Xirfaddii iyo Diblomaasiyadda uu kamuujiey khilaaf udhexeeyey labada mucaskar (Camp) ee ay Carabtu u qaybsanayd.
Ø Wuxuu la taliye u noqday mudo sanad iyo bar ah Madaxweyne Xasan Sheikh, isagoo si gooni ah ugu xilsaarnaa Shirkii London 2013, xaga abaabulka, diyaarinta ajendaha iyo qorshayaasha shirka, iyo war murtiyeedka shirka kasoo baxaya.
Ø Wuxuu kaloo ka qaybqaatay wadahadalkii Jubaland iyo Dawlada Federaalka ah.
Ø Wuxuu la Taliye Sare ee Arrimaha Siyaasada u noqday Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay uqaabilsan Arrimaha Soomaaliya Ambasador Nicolas Kay iyo sidoo kale Micheal Keating halkaasoo uu kala shaqeeyey Arrimaha dhismaha dawlad goboleedyadda, dib u eegista dastuurka, diyaarinta hanaanka doorashooyinka iyo dejinta siyaasadda Amniga.
Mudane C/shakur wuxuu aqoon u leeyahay Diinta Islaamka, gaar ahaan Falsafadda iyo fikirka Islaamiga ah ee mucaasarka ah.
Ø Waa siyaasi leh waayo aragnimo siyaasadeed, maadaama uu u soojoogay dhacdooyinkii iyo xaaladihii siyaasadeed ee uudalka soomaray 15kii sano ee ugu danbeeyey.
Ø Waa siyaasi leh, dulqaad iyo geesinimo go’aanqaadasho, kulansaday aqoonta Maadiga iyo tan diiniga ah, u furan dunidda Galbeeedka iyo Carabta, dhextaal u ah jiilalka siyaasadeed ee Soomaaliya ku hardamaya, galaangalna u leh xoogaga siyaasadeed ee kala fikirka duwan, fahamsan duruufaha qurbaha iyo nolosha dalka.